I-39 CLASSIC TAPER HAIRCUTS (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IINWELE ZAMADODA
Iinqwelo ze-39 zakudala zeTaper
Eyona Iinwele Zamadoda Iinqwelo ze-39 zakudala zeTaper
I-classic taper haircut yeyona nto ifanelekileyo yokwenza iinwele zamadoda ngokulinganayo okufanelekileyo phakathi kobunkunkqele kunye nokwenza izinto ezahlukeneyo. Ukucheba kweenwele zamadoda kusisitayile, esijikelezwe kakuhle esiya kujongeka ...
I-classic taper haircut yeyona nto ifanelekileyo yokwenza iinwele zamadoda ngokulinganayo okufanelekileyo phakathi kobunkunkqele kunye nokwenza izinto ezahlukeneyo. Ukucheba kweenwele zamadoda kuyinto enesitayile, isitayile esirhangqiweyo esiya kujongeka sihle eofisini okanye elunxwemeni. Unokude unxibe i-taper yeklasikhi kwitayile ebunjiweyo, enombala okhululekileyo, uyibuyisele kwisitayile esiqhelekileyo, okanye uyigcine inde kwaye inobungcali kwiintlanganiso zeshishini ezisesikweni.
Nokuba ngowuphi umsitho okanye uhlobo lweenwele, ezona zinwele zilungeleleneyo zihlaziyekile ngenkangeleko yemveli kodwa enefashoni. Jonga ezi zinwele zishushu zetape zeengcinga ngaphambi kotyelelo lwakho olulandelayo kwindawo yokucheba iinwele!
1Yintoni i-Classic Taper Haircut?
MbiniYintoni Endiyifunayo Kwinwele YeTaper Yenwele?
3Uyifumana njani i-Taper Haircut
4Uyenza njani indlela yokuHamba kweenwele eziCofileyo
5Eyona ndlela ilungileyo yokuCoca iinwele ukuzama
6Amacandelo e-Tapered aneNxalenye elukhuni kunye neenwele eziBhrashiweyo
7Ukucheba iinwele ixesha elide ngeCandelo
8I-Taper ephantsi enenwele eziMiselweyo eziMiselweyo
9Ukuphela kweTaper ephantsi ngeFreyimu ebunjiweyo
10I-Classic Taper Fade kunye nePompadour
Shumi elinanyeI-Classic Taper Fade enenwele eziMiselweyo zeNwele
12Ukuphela kweTaper ephantsi ngokudibanisa ngaphezulu
13Crew Sika ngeClass Taper
14I-Medium-Length Side Part Part Comb Over wit Mfutshane Amacala
Shumi elinantlanuUmda omde kunye neTaper Classic
16Ukuphela kweTaper ephantsi kunye neFaux Hawk
17Iinwele ezinde eziPrintiweyo ngeTaper Sika
18Icala eliQineneyo eliTshisiweyo leNwele elineTaper ephantsi
19I-Classic Taper Fade kunye nesiVuno esiFrentshi esiTyiweyo
Amashumi amabiniIinwele eziBrashiweyo eziBuyiselweyo ezinamaPhepha kunye neendevu
amashumi amabini ananyeUkuphela okuPhezulu okuCociweyo kunye noMbhalo oMde oCwangcisiweyo
22Ukuphela kweTaper ephantsi ngeCandelo eliNzima
2. 3Ukucheba iinwele zakudala ngeComb Over
24Ukuphela kweTaper Tade kunye neComb ende kunye neendevu
Yintoni i-Classic Taper Haircut?
I-classic taper haircut yamadoda sele ikho kangangeminyaka, kwaye inenwele ezimfutshane ezijikeleze amacala, ezithi zigqunywe zii-clippers. Ngaphezulu kukho ubude kuzo zonke iinwele, ushiye ubhetyebhetye kukhetho lwakho lwesitayile.
Phakathi kwamacandelo amabini eenwele kukho ukucofa, okubandakanya amacala amafutshane okuqhubeka ngokuqhubekayo njengoko esondela ngaphezulu. Ngamanye amagama, i-taper iya kuba mfutshane kwaye ngokuthe ngcembe iyaphela njengoko usondela entanyeni.
Abanye bathanda ukubetha yonke indlela ukuya entanyeni, ngelixa abanye bekhetha i-taper emfutshane kuphela kwindawo yenguqu esembindini-ukhetho luxhomekeke kuwe.
Kuxhomekeka kugxininiso kunye nokungafani ofuna ukukongeza kwizinwele zakho, kunokubakho unqamko olupheleleyo phakathi kwamacala amafutshane kunye nomphezulu omde, okanye ngokuthe chu ukuphela phakathi kwabo.
Ekugqibeleni, naluphi na uhlobo lweenwele, imilo yobuso kunye nobungqongqo beenwele zinokufumana i-taper haircut, eyeyona ibhalwe ngesomisi esomeleleyo kunye nokuncinci ipomade .
Yintoni Endiyifunayo Kwinwele YeTaper Yenwele?
Nangona i-classic tapered haircut iyinwele eguqukayo ngaphandle kwazo naziphi na iimfuno ezinzima kubude beenwele, kungcono ukuba abafana banobuncinane bee-intshi ezimbini zeenwele ezijikeleze intloko, ngakumbi ngaphezulu ngaphezulu.
Ubude beenwele obufunekayo emacaleni buyahluka kuba buya kucinywa ngesicoci seenwele, kodwa kubalulekile ukuba ube nee-intshi ubuncinci ukuba unethemba le-taper egudileyo, ende. Ngaphandle koko, ukunqunyulwa okufutshane kweenwele ezifakwe kulusu kulula ukuzifumana kunye nabuphi na ubude.
Njengophawu lwesitayile sayo esinokuguquguquka, i-classic taper hairstyle inokusebenza ngeenwele ezijijekileyo, ezi-wavy okanye ezithe nkqo njengoko ingaxhomekeki kulo naluphi na uhlobo lwesitayile.
Kwangokunjalo, iinwele ezipejiweyo zilungile ukuba ufuna ukwenza isitayile se-pompadour, i-quiff, i-slick back, ikama ngaphezulu, okanye naziphi na iinwele zamadoda ezinesiqhelo.
Uyifumana njani i-Taper Haircut
Uninzi lweenwele ziyazi ukuba uthetha ukuthini xa ucela i-taper haircut yesikolo esidala, kodwa njengesiqhelo, ukuzisa umfanekiso kuya kuhlala kunceda uqiniseke ukuba indawo yokucheba iinwele yakho iyayiqonda imbonakalo oyifunayo.
Ukufumana i-taper fade haircut, akukho bude beenwele busemacaleni okanye ngaphezulu. Ngokubanzi, amacala aya kuba buzzed kwi # 1, # 2, # 3 okanye # 4 eneenwele ezisikiweyo, kuxhomekeke ekubeni mfutshane kangakanani ofuna ukuba i-taper ibe yiyo. Emva koko isitayile sakho siya kunciphisa umphezulu ngesikere, zihlala zishiya ii-intshi ezi-2 zeenwele okanye ezinde ukuba uzenze isitayile kunye nokwenza i-hairstyle oyithandayo.
Esinye isigqibo sokwenza apho ufuna ukuba i-taper iqale kwaye iphele. Ukuthatha ixesha elide kunye nokuxinana yonke indlela ukuya entanyeni lukhetho oluhle, ngelixa ucofa kuphela isiqingatha samacala ngaphambi kokufikelela kubude obumiselweyo bubucayi.
Umahluko ungaziswa ngokubuza itaper ephezulu, ephakathi okanye ephantsi, apho isezantsi iqala nge-intshi ngaphezulu kweendlebe kwaye ephezulu iqala nge-intshi engezantsi kweenwele ngaphezulu.
Ukucela ingcebiso yesitayile kumchebi wakho yindlela elungileyo yokufumana ukuqonda okuhambelana nohlobo lweenwele zakho kunye nokuthungwa. Musa ukoyika ukubuza malunga nokuba zeziphi iimveliso zeenwele kunye nezixhobo zesitayile abazisebenzisayo.
Ngapha koko, ukugcinwa kubalulekile kwi-taper yeklasikhi, kwaye uninzi lwamadoda lufumanisa ukuba istrim rhoqo kwiiveki ezine ukuya kwezintandathu sigcina iinwele zijongeka zibukhali, zichaziwe kwaye zintsha.
Uyenza njani indlela yokuHamba kweenwele eziCofileyo
I-taper yeklasikhi kulula ukuyibeka kunye noluhlu lweemveliso zeenwele kwaye uninzi lwezitayile zibandakanya ukongeza ivolumu encinci. Abo bathanda ivolumu banokudala i-quiff okanye i-pompadour hairstyle, ngelixa abo bathanda ukuyigcina ilula banokulungelelanisa iinwele zabo okanye babhale ikama ngaphezulu.
Nangona isitayile sokucheba iinwele sinokuthatha ixesha elincinci, iziphumo kufanelekile. Kwicala elisezantsi le-taper, dibanisa ngaphezulu okanye ibrashi ebunjiweyo umva, landela le miyalelo.
Qala ngeenwele ezimanzi, ezomileyo ngetawuli. Zibethe zome iinwele zakho kwicala ozikhethele lona, ​​usebenzisa inxenye yendalo yeenwele zakho njengesikhokelo. Sebenzisa iminwe yakho ukongeza ivolumu.
Hlikihla i-pomade, i-wax okanye i-putty phakathi kwezandla zakho kwaye usebenzise iinwele zakho ngokulinganayo ukuze ubambe endaweni. Sebenzisa ikama ngeenwele zakho ngenkangeleko entle, okanye ushiye ubumdaka kwisitayile esidumbileyo.
Eyona ndlela ilungileyo yokuCoca iinwele ukuzama
Ezona zinwele zilungisiweyo zilunge kakhulu malunga nawuphi na umntu, kwaye le iinwele zamadoda zidumileyo zinxitywe kumakhulu eendlela. Le mifanekiso ilandelayo zezinye zeendlela zethu esizithandayo, kwaye zilula kuwe ukuba uzenze ngokwakho.
Ukusuka kokuhle kunye nokusesikweni ukuya kuthi xibilili kunye nokungaqheleki, iinwele zakudala zetaper isitayile wonke umntu afanele azame nokuba kukanye. Yenza i-bookmark kweli phepha ubonise isitayile sakho kwaye ufumane iinwele ezimangalisayo zexesha elizayo xa usikiwe.
Amacandelo e-Tapered aneNxalenye elukhuni kunye neenwele eziBhrashiweyo
Ukucheba iinwele ixesha elide ngeCandelo
I-Taper ephantsi enenwele eziMiselweyo eziMiselweyo
Ukuphela kweTaper ephantsi ngeFreyimu ebunjiweyo
I-Classic Taper Fade kunye nePompadour
I-Classic Taper Fade enenwele eziMiselweyo zeNwele
Ukuphela kweTaper ephantsi ngokudibanisa ngaphezulu
Crew Sika ngeClass Taper
I-Medium-Length Side Part Part Comb Over wit Mfutshane Amacala
Umda omde kunye neTaper Classic
Ukuphela kweTaper ephantsi kunye neFaux Hawk
Iinwele ezinde eziPrintiweyo ngeTaper Sika
indlela yokufumana uphawu lwam olunyukayo
Icala eliQineneyo eliTshisiweyo leNwele elineTaper ephantsi
I-Classic Taper Fade kunye nesiVuno esiFrentshi esiTyiweyo
Iinwele eziBrashiweyo eziBuyiselweyo ezinamaPhepha kunye neendevu
Ukuphela okuPhezulu okuCociweyo kunye noMbhalo oMde oCwangcisiweyo
Ukuphela kweTaper ephantsi ngeCandelo eliNzima
Ukucheba iinwele zakudala ngeComb Over
Ukuphela kweTaper Tade kunye neComb ende kunye neendevu
I-27 yeenwele eziPholileyo zaMadoda
Izitayile ezinde ezingama-50 zamadoda
I-39 yeeNwele eziPhezulu eziPhezulu eziPheleyo zaMadoda
Iinwele zeNtloko zamadoda eziBalaseleyo kuBume bakho boBuso
I-125 yeeTattoos eziBalaseleyo zaMadoda
Phezulu kwe-25 yokuLungisa iiNwele eziNcinci zamadoda
iinwele zamadoda aneenwele eziphakathi
enkulu 3 calculator
iinwele ezinde undercut amadoda
ndingalufumana njani uphawu lwam lwezodiac
ilanga inyanga ukunyuka ukuhambelana
I-Taper Fade Haircuts
I-35 yeNdawo yokuKhangela kweNwele yamadoda